Enweghị njem nlegharị anya na Tahiti: Ndị ọbịa 76,906 n'afọ a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Enweghị njem nlegharị anya na Tahiti: Ndị ọbịa 76,906 n'afọ a
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Site na ụgbọ elu nke awa 6 si Honolulu, a ga-akpọ mpaghara French a nke EU nke ọtụtụ Agwaetiti Polynesia na Pacific dịpụrụ adịpụ ma ka na-ahụ ebe ndị njem na-eme njem maka ndị ọgaranya na ndị ama ama.
Na Mee 2018, ndị bịara njem nlegharị anya na French Polynesia belatara site na 2.9% ma e jiri ya tụnyere Mee 2017. Ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta na-anabata ebe obibi na-ese n'elu mmiri bilitere n'ike (+ 28.2%) ebe ọnụ ọgụgụ ndị nabatara na ebe obibi ala jụrụ site na 8.4%.
Mbelata a nke ndị ọrụ ala na-emetụta ụlọ obibi nke azụmahịa, nke ndị na-abịa na-ebelata 10.5%
Ogologo oge ịnọ nke mụbara site na ụbọchị 1.2, mmụba buru ibu karịa ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta, ọnụ ọgụgụ nke abalị na-eto site na 6%.
Kemgbe Jenụwarị 1, 2018, Tahiti na agwaetiti ya edebanyere ndị njem nleta 76,906, mmụba nke 3.8% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Ndị bịara n'ụlọ obibi na-ese n'elu mmiri na-enye ihe 8.6 isi na nsonaazụ a na mkpokọta a na-ahụ na ebe obibi azụmahịa (-7%) na-atụnye ụtụ na nke a maka isi 5.2.
Ọnụ ọgụgụ nke abalị na-amụba 9.3% na 1,060,000 n'abalị na-anọ.